२८ करोडमा बिक्दै यो घर, भित्र हेर्दा उड्यो किन्नेको होस | Rochak
June 3, 2021 NepstokLeaveaComment on २८ करोडमा बिक्दै यो घर, भित्र हेर्दा उड्यो किन्नेको होस
काठमाडौं। तपाईको अनुसार घरमा कति पावर पोइन्ट हुनुपर्दछ ? यस प्रश्नलाई छोड्नुहोस्, तपाईंको सम्पूर्ण घरमा कति पावर पोइन्ट छन् ? तपाईंको उत्तरमा १५ -२० हुनेछ। यसभन्दा ज्यादा कोहि कसैले पावर पोइन्ट घरमा आवश्यक्ता पर्दैन। तर मिडेलसेक्स, युकेको एक घरको कोठा मै सयौ ‘पावर पोइन्टहरू’ विभिन्न स्थानमा राखिएका छन्। जसलाई देखेर किन्न पुगेका व्यक्ति समेत छक्क परेका छन्।
सो घर पछिल्लो समय चर्चाको विषय बन्न गएको छ। यस घरको मूल्य २.५ मिलियन डलर हो, अर्थात घरको मूल्य २८ करोड ३८ लाख नेपाली रुपैयाँ भन्‍दा बढी हो, तर चर्चाको विषय मूल्य भने होइन। यस घरको पावर पोइन्टले मानिसहरुमा प्रश्न खडा गरेको छ। यस घरमा तपाईंले पावर पोइन्टहरू देख्नुहुनेछ। टोवे डेभ नाम गरेकी एक महिलाले ट्विटरमा एक लिङ्क शेयर गरिन्, जसमा घरको सम्पत्तीको बारेमा सबै जानकारी समावेश गरिएको छ।
यसका साथै उनले क्याप्शनमा लेखेकि छन्,’ म यो घर किन्ने सोच्दै छु। तर म यी प्लग सकेटहरू मेरो लागि पर्याप्त छ कि छैन निर्णय गर्न सक्षम छैन। यो पनि चाखलाग्दो छ कि घरको भित्तामा केवल धेरै प्लग पोइन्टहरू मात्र छैनन्, तर कुनै सकेटहरू एक अर्कासँग समानान्तर छैनन् वा राम्रोसँग जडान भएका छैनन्।’
कोठाको तस्विर आएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छक्क परेका छन् उनिहरुले यहाँ बस्ने परिवारले यति धेरै सकेटहरू के गर्थे भन्ने प्रश्न गरेका छन्। जब मानिसहरूले यस घरको बारेमा जानकारी सङ्कलन गर्न इन्टरनेटको खोजी गरे, यो पत्ता लाग्यो कि सो घरमा वास्तवमै धेरै सकेटहरू छन्।
अब प्रयोगकर्ताले यस घर बारेमा उनीहरूको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन्। व्यक्तिहरू भनिरहेछन् कि यो एक इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण केन्द्र भएको हुनसक्छ। उनले यहाँ तालिम गराएका होलान्। अर्को प्रयोगकर्ताले लेखे यहाँ अगाडिको कोठामा सीआईए अफिस हुनुपर्छ।